बिपीको समाजवादको धारा र हलो कसरी मिल्छ ? 'कांग्रेस उल्टो बाटो हिँडेको छ' - प्रचण्ड - Everest Dainik - News from Nepal
बिपीको समाजवादको धारा र हलो कसरी मिल्छ ? ‘कांग्रेस उल्टो बाटो हिँडेको छ’ – प्रचण्ड
नेपाली राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ६३ वर्षीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला युवाको जोशमा रातदिन नभनी चुनाव प्रचार अभियानमा सक्रिय छन । गत मंसिर ३ गते एक मात्र पुत्र एवं प्रमुख सहयोगी साकार दाहाल ‘प्रकाश’ को निधनमा पुत्रशोकमा भएपनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न हुन लागेको संघीय संरचनाको पहिलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक स्थानमा विजयी गराउने अभियानमा छन प्रचण्ड । पारिवारिक समस्यामा कारण चुनाव प्रचारका लागि देशदौडाहामा जान भने सकेनन् ।
चितवन क्षेत्र ३ मा प्रचण्डका प्रतिस्पर्धीका रुपमा राप्रपा ‘प्रजातान्त्रिक’ का उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे चुनावी मैदानमा छन् । उनलाई नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन छ । तर नेपाली कांग्रेसको आफ्नो उम्मेदवार नभएको र प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख पात्र भएकाले कांग्रेस, राप्रपा लगायतका धेरै नेता र कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेका छन । भने धेरैले भोट प्रचण्डलाई दिने अभियानमा छन ।
आफ्नो एकमात्र छोरा प्रकाशको निधनले पारिवारिक पिडामा रहेका प्रचण्ड आँशु लुकाएर चुनावी मैदानमा खटिरहेका छन् । बाँदरझुला र माडी नगरपालिकाको चुनावी अभियान सकेर फर्केका प्रचण्डले मंगलबारसम्म पश्चिम चितवनको पर्साढाप र भगाहासम्मको घरदैलो सकिसकेका छन् । चुनाव र समसामयिक विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरिएको विशेष कुराकानी: दशवर्षे जनयुद्धपछि, शान्ति प्रक्रिया मार्फत मुलुकलाई संविधान दिने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभो, रोल्पा सिराहा हुँदै किन चितवन–३ छान्नुभो ?
याे पनि पढ्नुस फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणमा १२ जनालार्इ सफार्इ
याे पनि पढ्नुस धम्की र प्रलोभन दिएर वाम एकता भाँडने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै सर्तक रहन प्रचण्डको अपील
दीर्घकालिन रुपमा भन्नुहुन्छ भने अन्ततः कम्युनिष्टहरु नै मिल्नुपथ्र्यो । कांग्रेसहरु कांग्रेसँगै मिल्नुपथ्र्यो । देशको स्थिरता र विकासको निम्ती बिचार मिल्नेहरु नै एक ठाउँमा हुनुपथ्र्यो त्यसकारण म यता आएको छु । तपाई जहाँबाट उठेपनि जित्न सक्ने नेता हो, आज चितवन–३ मा कांग्रेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ किन ?
मेरो चाहना त्यही नै हो । हिजो हामी सवैले सहकार्यमा संविधान बनायौं । शान्ति सम्झौता गर्दा सात दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोईरला र नेकपा माओवादीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर शान्ति संझौता भयो । कांग्रेस एमाले र माओवादीको सहकार्यमा १२ बुँदे संझौता भयोे, भोली एमाले र माओवादीको पार्टी एकता भएपछि पनि कांग्रेसँग सहकार्य भईराख्न सक्छ । त्यसैले विकास निर्माण संमृद्धि र भोलिको राष्ट्रिय सहकार्यको निम्ति पनि कांग्रेसले मलाई दिनुपथ्र्यो भन्ने मेरो दाबी हो ।
वाम गठबन्धनको बहुमत आउने आधार के छ ?